Maxay ka dhigantahay Awood-siinta ganacsatada ee uu Farmaajo sheegay | KEYDMEDIA ONLINE
26 July 2021 Goorma ayay billaaban doontaa doorashadda Aqalka Sare?
26 July 2021 Fariinta Shacabka: RW xil ka xayuubinta la xisaabtan ku dar
26 July 2021 QM oo soo dhawaysay tallaabo uu qaaday RW Rooble
26 July 2021 Waalidiinta oo dib u billaabay bannaan-baxyada
26 July 2021 Frmaajo iyo Fahad Yaasiin waa musiibo – Nabaddoon Xaad
26 July 2021 Muxuu RW Rooble kala hadlay madaxda maamul goboleedyada?
Maxay ka dhigantahay Awood-siinta ganacsatada ee uu Farmaajo sheegay
Madaxweynaha muddo ileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa xalay dhiirri galiyay awood-siinta ganacsatada, haddaba maxay ka dhigantahay arrintan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa adkeeyey awood-siinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iib geeyo waxsoosaarka dalka, iyadoo uu kusoo aaday maalin kaddib markii ay heshiis wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku heshiiyay in la is dhaafsado Kalluun iyo Qaad.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xiriirka ujaray dowladda Kenya, isagoo dhanka kale heshiis iskaashi oo laga qariyay hay'adda sharci dejinta ee Baarlamanka Soomaaliya la saxiixday dowladda Itoobiya. Inkastoo aan la caddeyn heshiiskaasi haddana waxaa la leeyahay waxaa ku jira wadaagga qaar kamida dekadaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu ka dhammaaday muddo xileedkiisa wuxuu joojiyay qaadkii laga keeni jiray dalka Kenya, taa baddalkeedana waxaa la fasaxay kii dalka Itoobiya oo guud ahaan Soomaaliya oo dhan la geeyaa subax walba diyaarado sida qaad laga keenay dalka Itoobiya.
Haddaba maxay tahay waxa ku hoos qarsan kulanka dhiirri-gelinta ganacsatada loogu yeeray ee uu Farmaajo ku boorriyay Xukuumadda xil gaarsiinta ah?
Ganacsato uu ugu horreeyo Xasan Farmaajo oo ah madaxweynaha walaalkiis ayaa loo xiray in ay dalka keenaan Qaadka laga soo guro beeraha Itoobiya, inkastoo sida la saadaalinayo arrintan ay ku egtahay inta uu xafiiska joogo Farmaajo oo aysan sii socon doonin, haddana wuxuu isku dayayaa madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday in uu sharciyeeyo ganacsiga walaalkii, kana dhigo wax ay Soomaaliya dan ugu jirto, maadaama Kalluunkoodii suuq loo yeelay!
Iyadoo la qarinayo shakhsiga uu uxiran yahay Qaadka ayaa qof ganacsade ah oo loogu yeeray Maamulaha Shirkadda dhoofisa Kalluunka loo iib geeynayo Itoobiya laguna magacaabo Maxamed Ibraahim Cali (Cajiib) ayuu la kulmay madaxweyne Famaajo si indhaha dadka looga qariyo shakhsiga qarsoon ee loogu yeero Xasan Farmaajo kaasoo shirko kula ah ganacsatada maqaarsaarka ubadan ee uu la kulmay Farmaajo.
RW Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku dadaalay in ganacsatada beeraleyda qaadka dalkiisa ay suuq fiican ugu helaan qaadkooda, si ay Soomaaliya ugu soo dhoofiyaan Qaadka loo yaqaan Hareeriga ee ka baxa waddanka Itoobiya.
Warar 27 July 2021 19:30
Jubaland oo soo saartay go’aan uu RW Rooble ku farxay
Warar 27 July 2021 15:31
Guddi loo saaray barista kiiska Ikraan Tahliil
Warar 27 July 2021 13:57